NY LALAN’NY FITIAVANA… – filazantsaramada
NY LALAN’NY FITIAVANA…
Publié parfilazantsaramada	 septembre 22, 2014 septembre 22, 2014 Laisser un commentaire sur NY LALAN’NY FITIAVANA…
« Efa renareo fa voalaza hoe: « Tiava ny namanao », ary mankahalà ny fahavalonao. Fa Izaho kosa milaza aminareo hoe: Tiava ny fahavalonareo, ary mivavaha ho an’izay manenjika anareo, mba ho tonga zanaky ny Rainareo izay any andanitra hianareo. »
Ity teny eto anatrehantsika eto ity dia ao antin’ny toriteny nataon’i Jesosy teny an-tendrombohitra; ary ny teo aloha kelin’izao dia ny amin’ny tsy tokony hamaliana ratsy ny ratsy ataon’ny olona. Ny eto indray dia tsy ny tsy tokony hamaliana ratsy ny ratsy fotsiny fa ny hitiavana ny fahavalo, ary sarotra kokoa ny fitiavana ny fahavalo. Raha ny resaka fitiavana dia misy karazany:
– Misy ny karazana fitiavana avy amin’ny filàna avy ao anaty ary azo lazaina hoe filàna ara-nofo ihany, izay tsy maharitra loatra ary matetika mitranga aza rehefa vita na azo ilay filàna dia miafara amin’ny famonoana ilay olona nanaovana ny filàna, izany moa dia hita amin’ny fanolanana, rehefa voaolana ilay olona dia vonoina mba tsy ahafantaran’ny olonkafa ny fanolanana natao. Io dia fitiavana ara-nofo ihany.
– Ny karazany faharoa dia ny fitiavana ateraky ny fihavanana, na fitiavana ateraky ny firahalahiana ihany na ny fifankahazarana, ity fitiavana ity dia mety maharitraritra ihany, nefa mety hisy sembana ihany indraindray, ary azo raisina ny fifankatiavan’ny mpirai-tampo anefa miady noho ny fizarana lova.
– Ny karazana fitiavana fahatelo kosa dia izay tena miavaka dia ny Fitiavan’Andriamanitra na ny fitiavana avy amin’Andriamanitra dia ny ambara hoe Agape. Raha ny fitiavana ny teo amin’ny jiosy dia ny fitiavana ny mpiray rà aminy na ny mpiray fivavahana aminy no nibahana teo amin’ny fiainany. Ka rehefa tsy mitovy fivavahana na tsy mpiray rà aminy dia tsy ifandraisany loatra. Raha dinihina anefa ny tantara voalaza ao amin’ny Baiboly, ny olona noforonon’Andriamanitra dia namadika Azy tamin’ny fandrebireben’ny menarana ka nanao ny tenany ho andriamanitra, ary izany no fandikana ny didin’Andriamanitra nataon’ireo olombelona voalohany. Fampirafesana an’Andriamanitra izany nataon’ny olombelona izany. Ny valin’izany dia nanjary natahotra ny hifanatrika amin’i Jehovah Andriamanitra ny olombelona ka nandositra ny tavany. Ny fitiavan’Andriamanitra anefa dia niseho tamin’ny fitadiavany ireo olombelona ireo indray, Izy mihintsy no nandeha nitady azy ka nanao hoe aiza ianareo? Izy izay notsinontsiniavana indray no nitady fihavanana, ary izany no mbola hita eto amin’ny fampianaran’i Jesosy eto: tiava ny fahavalonareo. Tamin’ny naha mbola fahavalo ny olombelona iny mihintsy no nitadiavan’Andriamanitra azy, fa tsy niandry ny fiovan’izy ireo akory Izy vao nitady. Isika mbola ao anaty lavaky ny fahaverezana iny mihitsy no tonga Andriamanitra manatsotra ny tanany hanala antsika amin’izany toerana izany. Isika tao anaty fahaverezana no nanirahany an’Ilay Zanany malalany dia i Jesosy Kristy mba hanisotra ny fahotantsika rehetra, ny fahalotoantsika rehetra. Izany Fitiavan’Andriamanitra izany no tiany hananantsika koa! Raha ny fariseo aloha dia tsy nahatanteraka izany. Ary isika? Jesosy tsy tonga mba hanafoana ny lalàna. Tsy nanafoana ny lalàna Izy fa maika aza nanamafy izany; Jesosy Kristy anefa nahatanteraka ny lalàna, ary izany no mahamarina Azy. Tampina ny vavan’i Satana ny amin’i Jesosy. Isika anefa tsy nahatanteraka ny lalàna! Tsy manana fahamarinana isika! Jesosy Kristy no manana ny fahamarinana satria tsy nanota Izy na dia kely aza! Inona ary no azontsika atao? ny azontsika atao dia ny mitafy an’i Jesosy Kristy, ny fahamarinany no azontsika itafiana, ary izany no ambaran’ny Soratra Masina hoe sambatra ny olona izay voasarona ny fahotany. Raha hoy isika hoe tsy manana ota isika dia mamita-tena, ary ny marina tsy ato anatintsika. Raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina Izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin’ny tsi-fahamarinana rehetra.
Ny Tompo anie hampahery antsika.
Publié parfilazantsaramada septembre 22, 2014 septembre 22, 2014 Publié dansUncategorized